Darajayn: Aaway hodanka hodanka kuhay Afrika? - YoungAfrica.com - KU SOO DHAWEYN
ACCUEIL » DHAQAALAHA Darajaynta: Aaway kuwa hodanka ku ah Afrika? - YoungAfrica.com
Darajayn: Aaway hodanka hodanka kuhay Afrika? - YoungAfrica.com
Bangiga Mauritian Afrasia wuxuu daabacaa daabacaaddii saddexaad ee darajadiisa. Waa kuwee waddammada Afrika ugu taajirsan uguna urursan hantida ugu badan? Falanqaynta.
Wadamadeey ku urursan yihiin hantida ugu badan ee gaarka loo leeyahay, xaggee ku jiraan dhaxalka ugu sarreeya, sidee bayse u soo baxaan? Aaway magaalooyinkii hodanka ahaa ama ugu qaalisan ...? In kasta oo wadarta guud ee lagu hayo Afrika "uu kaliya kordhay 14% tobankii sano ee la soo dhaafay (2008-2018)," Warbixinta Afrasia Africa Wealth Report 2019 waxay bixisaa darajo ka mid ah tabarucaadka dalalka Afrikaanka ah ee 17.
Maaddaama ay jiraan ilo wareedyo lagu kalsoon yahay, xogta Algeria, DRC iyo Zimbabwe wali ma haynin Afrasia.
Laakiin muxuu Afrasia ula jeedaa maal dhan? Waa hantida "saafiga saafiga ah ee ay wadaagaan dhammaan shakhsiyaadka ku nool waddan, oo ay ku jiraan dhammaan hantidooda (hanti ma guurtada ah, hantida dareeraha ah, sinnaanta, danaha ganacsiga) ee ay leeyihiin deymaha ka yar," ayaa lagu yiri warbixinta bilowgii. Xaqiiqdii, marka la eego "isku-darka wadarta", gobolada ugu tirada badan ayaa ka faa'iideysan doona.
Si loo dhigo aasaaska qaar, Afrasia wuxuu xasuustaa taas oo leh 16% ee Dadka aduunka (1,2 bilyan oo degane) iyo 2,2 tirilyan oo doolar oo ah wadarta guud ee hantida, Afrika waxay leedahay kaliya 1% hantida adduunka (qiyaastii 204 tiriliyan doolar). Celcelis ahaan, saafiga saafiga ah ee qof kasta oo Afrikaan ah waa 1 900 dollars, oo ka horreeya 27 000 $ adduunka.
Qorayaasha warbixinta ayaa saadaaliyay kororka 35% wadarta guud ee hantida lagu haysto qaarada Afrika tobanka sano ee soo socota, oo gaaraya Xilliga tirilyanka Doolarka Mareykanka ee 3. Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha bangiga Mauritian: Mauritius, Ghana, Rwanda iyo Uganda waxay u soo baxayaan inay yihiin waddammada ugu fiican ee Afrika, iyadoo kororka hantidooda uu ka sarreeyo 2028% tobanka sano ee soo socota. .
Dhanka kale, Koonfur Afrika, Tansaaniya iyo Cote d'Ivoire waa inay sii wadaan inay la kulmaan kobac dhexdhexaad ah oo ku dhaca xoolahooda, oo ah nidaamka 30% halka Morocco, Masar iyo Nigeria laga yaabo inay la kulmaan dhibaatooyinka sababtoo ah rajada kobaca hooseeya (laga bilaabo 10% illaa 20%).
• Kiiska Koonfur Afrika
In kasta oo ay dhibaatooyinka sii kordhaya taas oo saameyn ku yeelata maamulka Koonfur Afrika, dalka ayaa weli ah midka ugu qanisan qaarada oo leh hanti dhan xNUMX bilyan. Dhowr arrimood ayaa gacan ka geystey qaab dhismeedkaan liita tobankii sano ee la soo dhaafay, ayaa lagu sheegay warbixinta, oo tilmaamaysa maamul xumada shirkadaha waaweyn ee dowladeed, hoos u dhaca lacagta, hoos u dhaca suuqyada maxalliga ah ee maxalliga ah iyo baxsiga dadka taajiriinta ah.
• Kiiska Mauritian
Warbixinta, ayaa lagu sheegay in tobankii sano ee la soo dhaafay, dalka Mauritius uu ahaa dalka ugu wanaagsan ee waxqabadka leh iyo kan labaad ee adduunka ugu weyn, kana dambeeyo Shiinaha, marka loo eego kororka hantida, "ayaa lagu sheegay warbixinta, gaar ahaan inay xaq u leedahay horumarkaan wanaagsan ee loogu talagalay muwaadiniinteeda. si ka sii ballaadhan "amniga" waddanka, waaxdeeda 'kobcinta' qaybta maaliyadeed, kor u kaca qiimaha guryaha, iyo koritaanka xoogan ee tirada dadka ugu yaraan milyaneer.
Magaalooyinka ay kormeerayaan
Riix halkan si loo helo daraasadda Afrasia gebi ahaanba.
Telecoms: Helios Towers ayaa mar kale isku dayey London - JeuneAfrique.com